Akụkọ - Ndi nzacha ederede na-egbochi igbochi mmetọ na ikuku?
Deep ọma efere
Ntị Otoscope Specula
Ntụziaka Pipette a na-edozi ahụ Ọ Na-egbochi Ọgba aghara na Aerosols?
Na laabu, a na-eme mkpebi ndị siri ike iji chọpụta otú kacha mma isi mee nyocha na nyocha dị oke egwu. Ka oge na-aga, ndụmọdụ pipette na-emegharị ka ọ kwekọọ na labs gafee ụwa ma nye ngwá ọrụ ka ndị ọkachamara na ndị ọkà mmụta sayensị nwee ike ịme nchọpụta dị mkpa. Nke a bụ eziokwu karịsịa ka COVID-19 na-agbasa na United States. Ndị na-amụ banyere ọrịa na ndị ọkachamara banyere ọrịa na-arụ ọrụ ehihie na abalị iwepụta ọgwụgwọ maka nje a. A na-eji ntụpọ pipette emechara nke plastik iji mụọ nje ahụ na otu nnukwu, pipettes iko dị ugbu a nwere mma ma na-akpaghị aka. A na-eji ngụkọta nke ọkpọkọ pipette 10 mee otu ule COVID-19 ugbu a na ọtụtụ ndụmọdụ ndị a na-eji ugbu a nwere nzacha n'ime ha nke kwesịrị igbochi 100% nke aerosol ma gbochie mmetọ cross mgbe nlele. Ma olee ka ndụmọdụ ndị a dị oke ọnụ ma dị oke ọnụ ahịa na-erite uru n'ezie na ụlọ ọrụ gafee mba ahụ? Kwesịrị ka ndị labs kpebie itinye mmiri na iyo?
Dabere na nnwale ma ọ bụ ule dị n'aka, ụlọ nyocha na ebe nyocha ga-ahọrọ iji ndụmọdụ pipette na-enweghị nzacha ma ọ bụ nke nzacha. Ọtụtụ labs na-eji ntụpọ azịza n'ihi na ha kwenyere na nzacha ahụ ga-egbochi aerosol niile imetọ ihe nlele ahụ. A na - ahụkarị nzacha dị ka ụzọ dị ọnụ ahịa iji kpochapụ kpamkpam ihe mmetọ sitere na ihe atụ, mana ọ dị nwute na nke a abụghị ikpe. Polyethylene pipette tip nzacha adịghị egbochi mmetọ, kama nke ahụ naanị na-ebelata mgbasa nke ihe mmetọ.
Otu isiokwu Biotix na nso nso a kwuru, sị, “[okwu] ihe mgbochi bụ ntakịrị ihe nke ndabara maka ụfọdụ ndụmọdụ ndị a. Naanị ụfọdụ ndụmọdụ dị elu na-enye ezigbo mgbochi akara. Ọtụtụ nzacha na-ebelata mmiri mmiri ịbanye gbọmgbọm gbọmgbọm. ” Emeela ihe ọmụmụ onwe onye na-elele ihe ndị ọzọ iji mee ka nzacha nzacha na arụmọrụ ha ma e jiri ya tụnyere ndụmọdụ ndị na-abụghị nzacha. Otu isiokwu bipụtara na Journal of Applied Microbiology, London (1999) mụtara ịdị irè nke ntụzi ntụpọ nke polyethylene mgbe etinyere ya na ngwụcha nke oghere pipet n'ọnụ cone ma e jiri ya tụnyere ndụmọdụ ndị na-abụghị ndị ehichachara. Site na nyocha 2620, 20% nke ihe ngosi gosipụtara mmetọ na-ebugharị na imi pipettor mgbe a na-ejighị ihe nhicha, na 14% nke ihe atụ na-emerụ emerụ mgbe ejiri polyethylene (PE) ihe nzacha mee ihe (Ngosipụta 2). Nnyocha ahụ chọpụtakwara na mgbe a na-etinye DNA ma ọ bụ DNA plasmid redio na-enweghị nzacha, mmetọ nke gbọmgbọm pipettor mere n'ime 100 pipettings. Nke a na-egosi na n’agbanyeghi na ndụmọdụ ndia edeputara na-ebelata oke nje na-esi n’otu ọkpọkọ aga na nke ọzọ, ihe nzacha ahụ anaghị akwụsị kpamkpam.
Site na mgbalị na-atachi obi n'ime afọ ole na ole gara aga, ACE toro ghọọ otu n'ime ndị nrụpụta ụwa na ndị na-eweta ngwaahịa maka ụlọ nyocha na ahụike. Anyị ga-anọgide na-emesi ndị ahịa anyị ngwaahịa na ọrụ kacha mma.